Rooble oo ka qeybgalaya Shir looga hadlayo Hormarinta Waxbarashada – Idil News
Rooble oo ka qeybgalaya Shir looga hadlayo Hormarinta Waxbarashada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan Magaalada london ee dalka Ingiriiska ayaa Maanta waxa uu halkaasi uga qeyb galayaa shirka caalamiga ah ee horumarinta waxbarashada.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saarayaa Arrimaha waxbarashada iyo dhalinyarada iyo sidoo kale sidii horay loogu socon lahaa maadaama Cudurka Coronavirus uu saameeyay waxbarashada Adduunka.
Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Mocalimu ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare rooble uu shirkaasi ka jeedin doonaa khudbad uu kaga hadlayo xaalada waxbarashada Soomaaliya, mid doorashooyinka iyo baahiyaha Guud ee xilligan kajira Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu Magaalada london kula kulmi doono Wasiirka Arrimaha dibadda & Ra’iisul Wasaaraha ingiriiska, isla markaana uu kala hadli doono marxalada doorasho ee lagu jiro.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa la filaya ain uu si deg deg ah ugu soo laabto Magaalada Muqdisho maadaama uu horkacayo howlaha doorashooyinka ee dhawaan dalka ka bilaabanaya.